မွန်ပါတီနှစ်ခုကို တစ်ပါတီတည်း ပေါင်းစည်းရေးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် | Myanmar Digital News
Download MDN App Now in Play Store!
Download MDN App Now in App Store!
မွန်ပါတီနှစ်ခုကို တစ်ပါတီတည်း ပေါင်းစည်းရေးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
11 Feb, 2018 By mdn
ရေး ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့ မွန်ဓမ္မာရုံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့ မနက်က မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ နဲ့ မွန်အမျိုးသားပါတီကို တစ်ပါတီတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစည်းရေးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်တစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စားပြုမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ နေရာ အများဆုံးရရှိဖို့အတွက်နဲ့ မွန်တစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စားပြုမယ့်ကိုယ်စား လှယ်တွေပိုမိုပေါ် ထွက်လာဖို့ အတွက်တက်ရောက်လာသူတွေက မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ဟု ဆိုသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ မွန်အမျိုးသားပါတီနဲ့ အမျိုးသမီးမွန်ပါတီဆိုပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့ပေမယ့် မွန်ပါတီတွေက အားလုံး ၄ နေရာလောက်ပဲရရှိတဲ့အပေါ်မှာ အခုလိုမွန် တစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စားပြုမယ့်ပါတီတွေထဲ မှ တစ်ပါတီတည်းပေါင်းစည်းသွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟု မွန်ဒေ သလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး နိုင်စံတင် က ပြောသည်။
နှစ်ဖက်ပါတီဝင်တွေ ရှိတဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာရှင်းလင်းပွဲတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိသလို မွန်နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ၆ ကြိမ်မြောက်ပါတီဝင်ခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေးပြီးမှ အခုလို ပါတီဝင်တွေ ရှင်းလင်းချပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈)ကျင်းပ
KBZ Bank Women' League ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် (၆) ယနေ့ ဆက်လက်ကျင်းပမည်
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော် မန္တလေးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ
မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး
နယ်ချဲ့သမားတို့အကြံ လက်မခံ အဆင့်ဆင့် တိုက်ယူခဲ့ရသော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသူများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ
၂၀၂၀ အားကစားပွဲတော် အမှတ်တရ အကြွေစေ့ ထုတ်ဝေမည်
အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုစလင်သို့ မေလတွင် ရွှေ့ပြောင်းဖွင့်လှစ်မည်
ဟွန်ဒါ အသေးစားဂျက်လေယာဉ် ပြည်ပတင်ပို့မှု နံပါတ်တစ်နေရာ ရောက်လာ
ပြင်သစ်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဥပဒေ တင်းကျပ်ဖို့ သတ်မှတ်လျာထား
France set to tighten immigration and asylum law